Aragtiwanaagsan.com – Maamulaha mareegta Aragtiwanaagsan.com oo saaka booqday xafiiska wasiirka warfaafinta somaliland!!
Latest update April 18th, 2019 8:59 AM
Maxaad ka taqaanaa Cumar Dubbe Cali yare??
Ururka Aqoonyahanka iyo Cilmi baadhista ee Somaliland oo Xalay casho-sharaf u sameeyey laba xubnood oo ka tirsanaa oo xilal dawladda Somaliland u magacawday!!
Xuskii sanad guuradii Aas aaskii ururkii SNM oo shalay hargeysa lagu qabtay!!
Wax ka baro Dhakhtarka dadka faqiirka ah ee dalka Masar!!
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka elatariya oo Somaliland ku yimid booqasho rasmiya!!
Maamulaha mareegta Aragtiwanaagsan.com oo saaka booqday xafiiska wasiirka warfaafinta somaliland!!
Feb 04, 2019 cabdicasiis mohamed Dhacdooyin, Qof Muhiim ah, Wararka 0
waxaan saaka xafiiskiisa ku soo booqday wasiirka warfaafinta Somaliland…Cabdiraxmaan Guribarwaaqo…wasiirku….waa nin aanu saaxiib nahay….waxa aan ku booqday xafiiskiisa qurxoon ee la yaabka lahaa sida loo quraaradeeyey…waxa uu ku jiray hawl-wasaaradeedkiisii maalin need…tilifoon uu cid ka qabto. iyo waraaq uu sa xeexo ayuu ku gudajiray. waxaan ku faraxsanahay in aan soo booqday…wasiir iyo wasaarad isleh.
faaladii: C.casiis Maxamed Yoonis..ansaari.
maamulaha websiteka aragtiwanaagsan.com
Ardayadani waxa ka qalinjabisay..machadka Aqoonyahan college ee ingiriisiga,waxay qaadatay diblooma ingiriisiya!! Laanta Af-ka carabiga ee BBCda, oo Wareysi la yeelatay..Dhakhtar rug cadda ah oo reer Masar ah oo beera Wadnaha iyo Kalyahay!!
Maxaad ka taqaanaa Cumar Dubbe Cali...
Ururka Aqoonyahanka iyo Cilmi baadhista...
Xuskii sanad guuradii Aas aaskii...
Wax ka baro Dhakhtarka dadka faqiirka...
Maxaad ka taqaanaa Cumar Dubbe Cali yare?? Cumar Dubbe Cali yare waa…Guddoomiyaha ururka Aqoonyahanka iyo Cilmi-baadhista ee Somaliland. (Somaliland Intellectuals and Research Center)…ururkan oo laba sano ka hor laga aas aasay,magaalada Hargeysa.waa Aqoonyahan ku dhashay magaalada hargeysa...
Ururka Aqoonyahanka iyo Cilmi baadhista ee...
Xuskii sanad guuradii Aas aaskii ururkii SNM oo...
Wax ka baro Dhakhtarka dadka faqiirka ah ee dalka...
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka elatariya oo...
Jilayaasha ..Sooraan iyo Jawaan oo aanu la...
Wasaaradda Arrimaha dibadda dalka Masar oo...
Nin afar xaas leh oo wareysi laga qaaday!!
Hantida ugu qaalisan ee uu leeyahay ciyaaryahanka...
Guryaha uu lahaa laacibka caalamiga ah..ee reer...